အဲဟ်လေ့ဘိုက်သ် (အ.စ) သတင်း ဌာန ၊အဗ်နာ ၊ ရှီအာ သတင်းများ Intro
ကျွန်ုပ်တို့ အကြောင်း RSS
အစ္စလာမ့် ရေးရာ စာရိတ္တ ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး
အာရှ တိုက်ဆိုင်ရာ ဓာတ်ပုံ သတင်းများ ဥရောပ
Video and Short Film
မူရင်း စာမျက်နှာ အစီရင်ခံစာ
အိုလမာ ယေ အစ္စလာမ် ဘာအတွက် ကြောင့် ရေငုံ နှုတ်ပိတ် နေရပါ သနည်း ?
March 27, 2013 - 12:00 AM News Code : 403417
Source : myanmar shia muslim	အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သခင် မလုပ် ပါစေနှင့် ၊မပြောကောင်း မဆိုကောင်း ၊ ဝဟာဘီ(စလဖီ) အိုလမာ ဖက်မှ တနေ့ ကအ်ဗာ ဝတ်ကျောင်းတော် ကို သဝါဖ် ပြုခြင်းနှင့် (ဟဂ်ျရေအစဝတ်ဒ်) ကျောက်တုံးအမဲရောင် ကို နမ်း လျှင် ရှေးရ်(က)
တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး၊ရုပ်ထုဆင်းထု ကိုးကွယ်ခြင်း မည်သည်ဟု ဖသ်ဝါပေးမည် ၊ပြီးနောက် အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ် သခင်၏ အိမ်တော်အား ပြိုဖျက်ရန် ရည်ရွယ် လာမည် ဆိုလျှင် ၊ထိုအချိန် တွင်လည်း အိုလမာယေအစ္စလာမ် ရေငုံ
နှုတ်ပိတ် ပြီးနေ နိုင်မည်လော ?
အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သခင် မလုပ် ပါစေနှင့် ၊မပြောကောင်း မဆိုကောင်း ၊ ဝဟာဘီ(စလဖီ) အိုလမာ ဖက်မှ တနေ့ ကအ်ဗာ ဝတ်ကျောင်းတော် ကို သဝါဖ် ပြုခြင်းနှင့် (ဟဂ်ျရေအစဝတ်ဒ်) ကျောက်တုံးအမဲရောင် ကို နမ်း လျှင် ရှေးရ်(က)တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး၊ရုပ်ထုဆင်းထု ကိုးကွယ်ခြင်း မည်သည်ဟု ဖသ်ဝါပေးမည် ၊ပြီးနောက် အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ် သခင်၏ အိမ်တော်အား ပြိုဖျက်ရန်
ရည်ရွယ် လာမည် ဆိုလျှင် ၊ထိုအချိန် တွင်လည်း အိုလမာယေအစ္စလာမ် ရေငုံ နှုတ်ပိတ် ပြီးနေ နိုင်မည်လော ?
(မဟာ) သနားကြင်နာ၊ညှာတာတော်မူသော ၊(မဟာ)အနန္တကရုဏာတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူသော မြတ်အလ္လာဟ် ၏အမည်နာမတော်ဖြင့်(ဦးစွာ) အစပြုပါသတည်း။
ရှောင်ဝါလ ၏ ၈ရက်နေ့ သည် အစ္စလာမ်လောက နှင့် အထူး သဖြင့် အဟ်လေ့ဘိုက်(အ.စ) ကို အချစ်ထားသည့် သူများ အတွက် အရမ်းဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်ကောင်းသည့် နေ့ ၊ကြောက် စရာ ကောင်းသည့်နေ့ ပင်တည်း …
အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့ အသိပင်တည်း… အစွန်းရောက် ၊ တယူသန်း၊လူမျိုးကြီးဝါဒီ ဝဟာဘီ များ အနေဖြင့် လွန်ခဲ့သည့် နှစ် (၈၀) အရင် ဂျန္နတ်သိုလ်ဗကီးလ် ရှိ အေမာမ်များ(အ.စ) ၏ကဗဲရ်တော်များ ၊ ၎င်းတို့၏ကဗဲရ်များအပေါ် တည်ထားသည့်အဆောက်အဦးများ(ရောင်ဇာ တော်များ) ကိုပြိုဖျက်ခဲ့ကြပေသည်။ ၎င်းတို့၏ လက္ခာဏာ အမှတ်အသားများကို လုံးဝ ပျောက် ဖျက် ခဲ့ကြပေသည်။
ဤသို့ဖြင့် ၎င်းတို့ (လူမဆန်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ) ၏ မရိုမသေပြုမှု ၊ ပြစ်မှား(ဖျက်စီးမှု)ကြောင့် သာသနာ့၏ အကြီးအကဲများ ဖြစ်သည့်မဟာတမန်တော်မြတ် ကြီး၏ အဟ်လေ့ဘိုက်(အ.စ) ၏ အဆင့်အတန်း ၊ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှု မှာ မလျော့ သွားချေ။
ဤလင်းနို့ လက္ခဏာ ရှိ ဝဟာဘီများသည် သူရိယနေမင်း အလင်းရောင် ကို ပျောက်ဖျက်နိုင် သည့်စွမ်းအား မရှိချေ။ ဤအတွက် ၎င်းတို့၏ ဤလုပ်ရပ်သည် ၎င်းတို့၏ ရူးသွပ်မှု ၊၎င်းတို့ ၏ မဇ်ဟဇ် ၏ အခြေမခိုင်ံမှု ၊ အစ္စလာမ် သာသနာတော် (အစစ်) နှင့် လမ်းလွဲနေမှု ၏ သက်သေ အထောက် အထား ဖြစ်ပေသည်။
ဤ(ဝဟာဘီများ) အနေဖြင့် အေမာမ်များ(အ.စ) သာသနာအကြီးအကဲများ၏ လက္ခဏာများ ကို သာလျှင် လွင်တီးခေါင်းပြင် ဖြစ်အောင် ဖျက်စီးခဲ့သည်မဟုတ်ချေ။ ဆော်ဒီ တနိုင်ငံလုံးရှိ မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) လက်ထက် တော်တွင်လည်း ရှိသည့် သမိုင်းဝင် လက္ခဏာ များ ကိုလည်း ဂျေဟာလသ် (စာမတတ်ပေမတတ်ခြင်း) ကို အခြေခံပြီး ဖျက်သ်ိမ်းခဲ့ကြသည်။
အမှတ်တကယ် တလောကလုံးတွင် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း သမိုင်းဝင် လက္ခဏာများ ၊လက်ရာများ ကို ထိန်းသိမ်း နိုင်ရန် နှင့် စီစဉ် နိုင်ရန် အရမ်း ငွေကြေးအကုန် အကျ ခံကြပေသည်။ ကမ္ဘာသူ ၊သား များ လာရောက် ကြည့်ရှု ရန် ဖိတ်ခေါ်
လေသည်။ ဤအရာ များ အတွက် ဂုဏ်ယူ ကြ ပေသည်။ အကြောင်းသည် ကား သမိုင်းဝင် လက္ခဏာများ ၊လက်ရာများ သည် ၎င်းတို့၏ ယဉ်ကျေးမှု ၊စာပေ ၊ အနုပညာ များကို တင်ပြနေသည့် အကောင်းတကာ အကောင်းဆုံးသက် သေအထောက် အထား ဖြစ်ချေသည်။
ဤ နေရာတွင် အရေးကြီးသည့် အချက် တစ်ခု ရှိပေသည် ၊ ယခုတိုင် မွတ်စလင်အများ စု
အနေဖြင့် ဂရုမပြု နိုင်သေချေ။ ထိုအရာ မှာ ဆော်ဒီ နိုင်ငံ ရှိ သမိုင်းဝင် လက္ခဏာများ ၊လက်ရာများသည် ထိုနိုင်ငံ ကို ကြီးစိုးထားသည့် ဝဟာဘီများပိုင် ဆိုင်သည့် အရာများ မဟုတ် ချေ။ ဤ အရာများ အားလုံးသည် အစ္စလာမ်လောကတစ်ခုလုံး ရှိ မွတ်စလင်ယောက်တိုင်း နှင့် သက်ဆိုင်ပြီး ၊ပိုင်ဆိုင်ပေသည်။ ဤအတွက် ကြောင့် မသိနားမလည် သည့် ဝဟာဘီကို ကြိုက် နှစ်သက်သည့် အုပ်စု အနည်းငယ် လေးကို မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) ၊ အဟ် လေ့ဘိုက် (အ.စ) ၊ နှင့် သာဝကတော်များ (ရ.သွေ့) တို့၏ အလွန်တန်ဖိုးကြီးမား လှသည့် သမိုင်းဝင် လက်က္ခဏာရပ် များ နှင့် အဆောက်အဦးများ ကို ပျောက်ဖျက် ၊ကွယ်ပျောက် ခွင့် မပေး သင့် ချေ ။ ဤ ဝဟာဘီများ သည် မွတ်စလင်များအတွက် ဤအလွန်တန်ဖိုးကြီးမားလှသည့်သမိုင်း ဝင် လက်က္ခ ဏာရပ် များနှင့် အဆောက်အဦးများ မရှိအောင် လုပ်ခဲ့ ပေ သည်။
ဝမ်းနည်း ကျေကွဲ စရာ … ယနေ့လည်း ဝဟာဘီများ အနေဖြင့် မည်သည့်နေရာ တွင် မဆို သမိုင်းဝင် လက္ခဏာများ ၊ အဆောက်အဦးများ တွေ့လျှင် ထိုနေရာ ကို လွင်တီးခေါင်းပြင် အသွင် ပြောင်း လိုက်ကြပေသည်။ မွတ်စလင်များ ကို အရှက်ရအောင် လုပ်ကြသည်။
ဤအတွက်ကြောင့် မွတ်စလင်များ အထူးသဖြင့် အိုလမာယေ အစ္စလာမ်အနေဖြင့် ဤဝဟာ ဘီများ ၏လုပ်ရပ်များ အပေါ် စောဒက တက်ခြင်း ၊ သပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြ ခြင်း မပြု လုပ်သင့် ပါ သလော ? ဤဝဟာ ဘီများ အနေဖြင့် ထိုသမိုင်းဝင် လက္ခဏာများ ၊ အဆောက် အဦးများ ကို နဂိုနေရာတွင်နဂို အသွင်အတိုင်း ပြန်လည် တည် ဆောက်ပေးလာရန် မဖြစ် မနေအခြေ သို့ ရောက်လာအေင် မကြိုးပမ်းသင့်ပါသလော ?
အကယ်၍ မပြောကောင်း မဆိုကောင်း တစ်နေ့ ဝဟာဘီ အာလင်မ် အနေဖြင့် ကအ် ဗာ ဝတ်ကျောင်းတော် ကို သဝါဖ် ပြုခြင်းနှင့် (ဟဂ်ျရေအစဝတ်ဒ်) ကျောက်တုံးအမဲရောင် ကို နမ်း လျှင် ရှေးရ်(က)တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး၊ရုပ်ထုဆင်းထု ကိုးကွယ်ခြင်း မည်သည်ဟု ဖသ်ဝါပေးမည် ၊ပြီးနောက် အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ် သခင်၏ အိမ်တော်အား ပြိုဖျက်ရန် ရည်ရွယ် လာမည် ဆိုလျှင်
၊ထိုအချိန် တွင်လည်း အိုလမာယေအစ္စလာမ် ရေငုံ နှုတ်ပိတ် ပြီးနေ နိုင်မည်လော ?
ကျွန်တော်တို့ အနေဖြင့် ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ အင်ရှာအလ္လာဟ် အမြန်ဆုံး ဝဟာဘီ များ ကုန်ဆုံး သွားပြီး ၊မွတ်စလင်များ၏ ဤ လိုအင်ဆန္ဒ (မွတ်စလင်များ၏ သမိုင်းဝင် လက္ခဏာ များ ၊အဆောက်အဦးများကိုပြန်လည်ပြီးနဂိုအတိုင်းဆောက်လုပ်ခြင်း)အားလက်တွေ့အကောင်
အထည် ဖော် နိုင်ပြီး ၊ မွတ်စလင်များအတွက် အေးချမ်းသာယာမှု နှင့် အဆင်ပြေ ၊ ချမ်းမြေ့ မှု ကို ရရှိ သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အာမီး(န) ယာရဗ်ဗေ အာလေမီး (န)
(ဟောကြားခဲ့သည့် ရက်စွဲ) ၆ရက် ၆လ ၁၃၉၁ အီရန် သက္ကရာဇ်
အီးမေးလ် ပရင့်ဒ် ထုတ်ယူရန် အမြင် share လုပ်ရန် Twitter
ဓာတ်ပုံ သတင်းများ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မိုဟမ္မဒ် သကီ ရှာရွတ်ခ်ခီ အတွက် ၇ ရက် မြောက် မဂ်ျလစ် နှင့်ကုရ်အာန်ခွာနီ ၊ကွမ်း / photos December 6, 2016 - 11:30 PM
အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် ရှာရွတ်ခ်ခီ အတွက် ကုရ်အာန်ခွာနီ ပြုလုပ် ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် / photos
November 29, 2016 - 10:53 PM
နောက်ဆုံးရ သတင်းများ အကြည့်အများဆုံး ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာ စာမျက်နှာများ သတင်းအမှား ဖော်ပြသော ဒေးလီးမေးလ် သတင်းဌာနကို အစိုးရတုံ့ပြန်
December 9, 2016 - 9:05 PM
မုံးကိုးတိုက်ပွဲတွင် ပျောက်ဆုံးခဲ့သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်သုံးဦးကို သေဆုံးလျက်ပြန်တွေ့
December 9, 2016 - 8:54 PM
ဆရာဝန်များအတွက် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ ဦးစားပေးဆောက်မည်ဟု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြော
December 9, 2016 - 8:29 PM
သမ္မတဟောင်း ဦးသိန်းစိန် အာရှကော့စမိုပိုလီတန်ဆု ရရှိ
December 9, 2016 - 8:06 PM
ရေဘေးကြောင့် ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း ကျပ်သန်းခြောက်သောင်းကျော် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း တိုင်းအစိုးရထုတ်ပြန်
December 9, 2016 - 7:51 PM
ရခိုင်အရေး၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အရေးများအပေါ် အလေးအနက်ထားရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တိုက်တွန်းကြောင်း မစ္စတာ ဗီဂျေနမ်ဘီးယား ထုတ
December 9, 2016 - 7:35 PM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး လာရောက်တွေ့ဆုံ
December 8, 2016 - 7:02 PM
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းဥက္ကဋ္ဌနှင့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
December 8, 2016 - 6:47 PM
ကိုယ်စားလှယ်များ လူကြီးလူကောင်းပီသကြရန် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သတိပေး
December 8, 2016 - 6:36 PM
မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်၏ ဘင်္ဂါလီအရေးပြောဆိုမှု ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ရှုတ်ချ
December 8, 2016 - 6:23 PM
မန္တလေးမြို့တွင်း ရေနုတ်မြောင်းများနှင့် ရေဆိုးသန့်စင်စွန့်ပစ်စနစ်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် အေဒီဘီမှ ဒေါ်လာသန်း ၆၀ချေး
December 8, 2016 - 6:08 PM
December 8, 2016 - 5:53 PM
ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေကြောင့် အာဆီယံဒေသတွင်း မတည်ငြိမ်မှုများ မဖြစ်ပွားစေရန် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်း ကိုဖီအာနန်ဆို
December 7, 2016 - 10:24 PM
ရန်ကုန်နှင့် ဖူခုအိုကာကို ညီအစ်မမြို့တော်အဖြစ် ယနေ့ည လက်မှတ်ထိုးမည်
December 7, 2016 - 10:07 PM
ရခိုင်ပြည်နယ်အသုံးစရိတ် နှစ်စဉ်လိုအပ်ငွေထက် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ချခံရ
December 7, 2016 - 9:52 PM
ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်များတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သူတစ်ဦး ရေးသားသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်များ စာအုပ်မိတ်ဆက်
December 7, 2016 - 9:31 PM
မြောက်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့များအား အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ သတ်မှတ်ရန် ရှမ်းပြည်လွှတ်တော် ဆုံးဖြတ်
December 7, 2016 - 9:18 PM
အေမာမ် ဟိုစိန် (အ.စ) ၏ ကျဲဟ်လွန်မ် အချိန်အခါတွင် အမေရိကန် နိုင်ငံသူ တစ်ဦး ရှီအာ ဖြစ် December 6, 2016 - 11:46 PM
ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မိုဟမ္မဒ် သကီ ရှာရွတ်ခ်ခီ အတွက် ၇ ရက် မြောက် မဂ်ျလစ် နှင့်ကုရ်အာန်ခွာနီ ၊ကွမ်း / photos December 6, 2016 - 11:30 PM
သမ္မတနှင့် မြန်မာတပ်ချုပ်ကို မလေးရှားတပ်ချုပ် လာတွေ့
December 6, 2016 - 7:28 PM
လူသတ်၊ မုဒိမ်း၊ မီးရှို့မှုများလုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဟု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရှင်းလင်း
December 6, 2016 - 7:18 PM
မောင်တောအကြမ်းဖက်မှု လေ့လာရေးကော်မတီ ရခိုင်လွှတ်တော်ဖွဲ့စည်း
December 6, 2016 - 7:07 PM
ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းအားလုံး လေဆိပ်သစ်တွင် ပြောင်းရွှေ့ပြေးဆွဲရမည်
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမ်းမဲဆန္ဒနယ်၌ ဒေါက်တာအေးမောင် ဝင်ပြိုင်မည်
December 6, 2016 - 6:36 PM
မတရားမှုများကို ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်ကြဖို့ အမတ်များကို ဦးဝင်းမြင့် အကြိမ်ကြိမ် တိုက်တွန်း
December 6, 2016 - 6:22 PM
သမ္မတဦးထင်ကျော်နှင့် မလေးရှားတပ်ချုပ် ရခိုင်အရေး ဆွေးနွေး
December 5, 2016 - 7:42 PM
ရာထူးမှ နုတ်ထွက်တော့မည်ဟု နယူးဇီလန် ဝန်ကြီးချုပ် အံ့အားသင့်ဖွယ် ကြေညာ
December 5, 2016 - 7:30 PM
ရခိုင်အရေးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သြဇာနှင့် အင်အားကို အသုံးချရန် အချိန်ရောက်ပြီဟု ဦးရဲထွဋ်ပြော
December 5, 2016 - 7:16 PM
၁၉၉၆ ခုနှစ် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု နှစ်၂၀ ပြည့် အခမ်းအနား တရားဝင်ကျင်းပခွင့်ရ
December 5, 2016 - 7:02 PM
အာဆီယံဒေသတွင်း တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဆန်ရောင်းချရန် အစိုးရချင်းသဘောတူစာချုပ်သစ်များ ပြန်လည်ချုပ်ဆိုရန် စီစဉ်
December 5, 2016 - 6:48 PM
ပြည်တွင်းရေးကို ၀င်မစွက်ဖက်ရန် သူရဦးရွှေမန်းပြော
December 5, 2016 - 6:33 PM
ရိုဟင်ဂျာတွေအား မျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ခြင်းအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရပ်တန့်ပစ်ရမည် ဟု မလေးရှားဝန်ကြီး ပြော
December 4, 2016 - 7:47 PM
တရုတ်ဝယ်လက်များ မလာရဲသေး၍ သစ်သီးဝလံ ရောင်းချမှုကို ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ရွှေ့ဆိုင်းထားဟုဆို
December 4, 2016 - 7:34 PM
အကြံပေးကော်မရှင်အဖွဲ့ကို ဖျက်သိမ်းပေးရန် မြောက်ဦးနှင့် မြေပုံတွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်
December 4, 2016 - 7:16 PM
မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်လေးဖွဲ့၏ ပျက်ကွက်မှုကြောင့် မတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင် တုန့်ပြန်
December 4, 2016 - 7:00 PM
‘မင်္ဂလာပါ’ပွဲတော်ဒုတိယနေ့အစီအစဉ် လာရောက်ကြည့်ရှုသူ ပိုမိုများပြား
December 4, 2016 - 6:45 PM
သတ္တုတူးဖော်ရေး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုမရှိအောင် လုပ်မည်ဟု သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာနပြော
December 4, 2016 - 6:26 PM
၂မိနစ်တာ အဲဟ်ကာမ် ဝါဂျစ်ဗ်အမျိုးအစားများ နှင့်ဟရာမ်အမျိုးအစားများ December 3, 2016 - 11:52 PM
အိုင်ယာလန် ပါလီမန် အား ဥရောပ ရှိအချို့ အစ္စလာမ်မီ ဌာများသည် ဒါအေရှ် (IS) ကိုကူညီနေ ကြောင်း ပြောကြား / ဆီးရီးယား နိုင်ငံ မွဖ်သ
December 3, 2016 - 11:50 PM
အာလေ့ စအူးဒ်တရားရုံးမှ ကသီးဖ်နေ ရှီအာ လူငယ် ၃ဦးအား သေဒဏ် အမိန့်ချမှတ်
December 3, 2016 - 11:45 PM
ကိုဖီအာနန် ဦးဆောင်သည့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ မောင်တောစစ်ဆင်ရေးနယ်မြေသို့ ကွင်းဆင်းလေ့လာ
December 3, 2016 - 10:30 PM
ဝန်ကြီးများလာဘ်မစားခြင်း စိတ်အကျေနပ်ဆုံးဖြစ်သော်လည်း အရာရှိငယ်အချို့ ဖြစ်စေချင်သကဲ့သို့မဖြစ်သေးကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြာ
December 3, 2016 - 10:16 PM
ရခိုင်အရေး နိုင်ငံတကာအသိုင်းဝိုင်းက မျှမျှတတ မြင်ဖို့လိုဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
December 3, 2016 - 10:03 PM
မလေးရှားရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားများ အထူးဂရုပြုသွားလာနေထိုင်ကြရန် မြန်မာသံရုံး သတိပေး တိုက်တွန်း
December 3, 2016 - 9:50 PM
December 3, 2016 - 9:37 PM
လေကြောင်းနှင့် လက်နက်ကြီး ပစ်ကူများသုံးပြီး မုံးကိုး စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲ ခုခံနေဟု ဆို
December 3, 2016 - 9:25 PM
နိုင်ဂျီရီးယား ဖက်ဒရယ် တရားရုံးချုပ်မှ ရှိက်္ခ ဇက်ဇကီ နှင့် ၎င်း၏ဇနီး အားလွှတ်ပေးရန် အမိန့်ချမှတ် December 2, 2016 - 11:50 PM
တရုတ် အာဏာပိုင်များ ၏ ပြောကြားချက်အရ တရုတ်နိုင်ငံ တွင် ဆင်းရဲ မွဲတေမှု ၇၀ % မရှိတော့ချေ
December 2, 2016 - 11:49 PM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် စင်္ကာပူရောက်မြန်မာမိသားစုများ အမေးအဖြေ အစီအစဉ်မှ မေးခွန်းနှင့် အဖြေအချို့
December 2, 2016 - 11:05 PM
ကိုဖီအာနန်၏ ရခိုင်ခရီးစဉ် ဆန္ဒပြကန့်ကွက်ခံရသော်လည်း နှစ်ဖက်အဖွဲ့စည်းများနှင့် တွေ့ဆုံရန်ရှိ
December 2, 2016 - 10:52 PM
ပြင်သစ်သံရုံးရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေအပေါ် အသိမှတ်ပြုကြောင်း ဒုသမ္မတပြော
December 2, 2016 - 10:42 PM
လားရှိုး တပ်သိမ်းမြေ ပြန်လည်စွန့်လွှတ်မည်မဟုတ်ဟု ပြည်ထဲရေးဒုဝန်ကြီးပြော
December 2, 2016 - 10:31 PM
မြန်မာ့ ပြည်တွင်းရေး ဝင်စွက်ဖက်ဖို့ မရှိဟု တရုတ်ပြော
December 2, 2016 - 10:15 PM
December 2, 2016 - 9:57 PM
December 2, 2016 - 9:45 PM
စင်ကာပူစီးပွားရေးကို အနှစ် ၂၀ အတွင်း မြန်မာကျော်တက်ရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြား
December 1, 2016 - 11:58 PM
December 1, 2016 - 11:50 PM
၂၀၁၇ တွင် ဖရီးပါမစ်ဖြင့် တင်သွင်းမည့်ကားများ ဘယ်မောင်းတစ်မျိုးတည်းသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုမည်
December 1, 2016 - 11:40 PM
ရန်ကုန်မြို့ ရခိုင် နှင့် မွတ်စလင် အသိုင်းအ၀ိုင်းနှစ်ခုမှ လူငယ်များနှင့် ကိုဖီအာနန် တွေ့ဆုံ
December 1, 2016 - 11:25 PM
အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ကမ္ဘာ့ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အခမ်းအနား ပြုလုပ်
December 1, 2016 - 11:10 PM
အစိမ်းရောင်စီးပွားရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် စရိတ်ကုန်ကျမှုများသော စီမံကိန်းများ ရှောင်ရှားရန် သမ္မတပြော
November 30, 2016 - 11:02 PM
သံတမန်ဆက်ဆံရေး တည်ထောင်ပြီး နှစ် ၅၀ ပြည့်ကာလ၌ စင်ကာပူသို့ သုံးရက်တာ ခရီးစဉ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရောက်ရှိ
ပညာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးနှင့်အဖွဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ လေ့လာရေးသွားရောက်
November 30, 2016 - 10:33 PM
နမ့်ဖတ်ကာစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂ ဦး ပျောက်ဆုံး
November 30, 2016 - 10:18 PM
မြန်မာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များကြောင့် ကြီးကြီးမားမား ထိခိုက်နေဟု တရုတ်သတင်းစာရေး
November 30, 2016 - 9:52 PM
သတင်းအမှား ဖော်ပြသော ဒေးလီးမေးလ် သတင်းဌာနကို အစိုးရတုံ့ပြန်
ယခုနှစ် ရှဗ်ဗေဝေလာဒသ် သေ အေမာမ်မဲဟ်ဒီ (အ.စ) မြင်ကွင်း / မစ်ဂျစ်ဒ် ဂျမ်ကရန် June 3, 2015 - 11:51 PM
ISIL (ခ) အစ္စလာမ်ခုတုံးလုပ် မိုဂျဟစ် အမည်ခံ သက္က်ဖီးရီးများ ၏ပုံရိပ်အစစ် August 27, 2014 - 8:29 PM
ကိုလိုနီ အစ္စရေး လူယုတ်မာ များ၏ လူမဆန်မှုနှင့် မျက်နှာအမှန်ပြပုံရိပ်များ July 21, 2014 - 7:29 AM
အစိမ်းရောင် ပန်းသီးဖျော်ရည်က ဝိတ်ကျစေနိုင်ပါတယ် April 11, 2014 - 6:50 PM
လူသားအချင်းချင်း အမုန်းမပွားစေဖို့ ငါတို့နှုတ်ကို စောင့်စည်းစို့ လှုပ်ရှားမှု မန္တလေးတွင် ပြုလုပ် April 11, 2014 - 6:38 PM
မိတ္တူကူးခြင်း ကော်ပီ © ۲۰۱۴ .အကြောင်းအရာ အားလုံး မဂ်ျမယေဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်သ်(အ.စ) သာတရားဝင် ပတ်သက် ပိုင်ဆိုင်ပါ သည်